दाङमा हात्तीपाइले विरुद्धको ७ वर्षे अभियान : करोडौं सकियो, भेटिएन लक्ष्य ! – Janaubhar
दाङमा हात्तीपाइले विरुद्धको ७ वर्षे अभियान : करोडौं सकियो, भेटिएन लक्ष्य !
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १६, २०७४ | 243 Views ||
दाङ । जिल्लामा हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिएको ७ वर्ष लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ देखि जिल्लामा अभियान थालिएको थियो । उत्तिकै समयमा अभियान सञ्चालन गरिएको छिमेकी जिल्ला बाँके बाहेकमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरिसक्दा दाङमा भने समय थप गर्नुपरेको छ ।
५ वर्षमा निर्मुल पार्ने अपेक्षा गरिएको यति लामो समय बितिसक्दासम्म पनि दाङमा अझै ६ प्रतिशत हात्तीपाइले रोगको जोखिम देखिएको छ । शुरुवाती समयमा जिल्लामा ३० प्रतिशत यो रोगको जोखिम थियो । निर्धारित समयमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि दाङमा दुई वर्षका लागि उक्त अभियानलाई थप गर्नुपरेको छ ।
हात्तीपाइले निर्मुल पार्नका लागि दाङमा मात्र करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दाङमा मात्र यो रोगको निवारणका लागि सरकारले १ करोड ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ९५ लाख ६२ हजार र त्यसअघिको वर्षमा ७२ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
अभियान सञ्चालन भएदेखि प्रत्येक वर्ष करोडको हाराहारीमा जिल्लामा रकम खर्च हुँदै आएको छ । उक्त रकम जनशक्ति व्यवस्थापन, सचेतनामूलक कार्यक्रम, औषधीको ढुवानी, सरोकारवाला एवं स्वास्थ्यकर्मीका लागि अभिमुखीकरण, प्रचारप्रसार लगायतका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका हात्तीपाइले रोगविरुद्धको अभियानका फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिए । तर रकम भएअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
२४ सय स्वयंसेवक परिचालन
हात्तीपाइले रोगको अभियानका लागि जिल्लामा २४ सय स्वयम्सेवक परिचालन गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ । यति संख्याको जनशक्ति शुरुवाती समयदेखि नै परिचालन गरिएको हो भने जिल्लास्तरमा अन्य कर्मचारीहरु पनि खटिएका छन् । स्वयंसेवकहरुले वर्षको दुई दिन अभियानको सफलताका फिल्डमै खटिएर र अन्य दिनमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिए ।
किन भएन अपेक्षित उपलब्धि ?
निर्धारित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला दुबै किसिमका कारणलाई लिइएको छ । सर्वप्रथम त स्वयं सरोकारवालाले अभियानप्रति चासो नदिनु, औषधी सेवन गर्न नमान्नु, जिल्लाभन्दा बाहिर रहनु, औषधि सेवन गर्दा असर पर्ने भ्रम छरिनु लगायतका कारणले अभियानले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख घनश्याम पोख्रेलले बताए ।
यस्तै विगतका दिनमा औषधि लगेर पनि सेवन नगर्नु र स्वयंसेवकहरुको विश्वासमा औषधि सेवन गर्न नमान्दा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘सरोकारवालातर्फ औषधि सेवन गर्दा असर गर्ने भ्रम अझै छ । उहाँहरु औषधी खानेकुरामा अझै पनि तयार हुनुहुन्न । यस्तै स्वयंसेवकहरुले सेवन गर्नका लागि औषधि दिने तर स्थानीयले विश्वास नमानिदिने कारण पनि समस्या भएको हो ।
उनले भने ‘यद्यपि यी दुबै कुरा हैनन् । औषधीले न त असर गर्छ । न त स्वयमसेवकहरुको विश्वास नमान्नुपर्ने नै छ । स्वयंसेवकहरु पूर्णतः तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ । ’
छ प्रतिशत जोखिम अझैै
जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा अझै पनि ६ प्रतिशत हात्तीपाइले रोगको जोखिम रहेको छ । शुरुवाती समयमा ३० प्रतिशत जोखिम अभियान जारी रहेसँगै वर्षेनी न्यूनीकरण हुँदै गएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख पोख्रलले बताए । जोखिम कायमै रहेकाले ५ वर्षमा सकिने कार्यक्रम २ वर्षका लागि थप गरिएको उनले बताए ।
‘अब स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिमुलक संरचना आएको छ । जसले पक्कै पनि यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने भुमिका खेल्ने विश्वास गरेका छौं ।’ पोख्रेलले भने, ‘हाल अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर विगतको भन्दा नयाँ र प्रभावकारी तरिकाले अभियान अघि बढाउनेछौं ।’
Posted in समाचार, समाज, स्वास्थ्य, Flash News
Nextसकियो दाङ महोत्सव